Laser methane gasi leak detector Fekitori - China Laser methane gasi leak detector Vagadziri, Vatengesi
1.Overview Iyo Ruoko-rwakabata laser kure methane gasi leak detector inoshandisa tunable laser spectroscopy (TDLAS) tekinoroji kuti ikurumidze uye kunyatsoona kubuda kwegesi mukati mechinhambwe chemamita makumi matatu. Vashandi vanogona kuona zvakaomarara-kusvika kana kunyange nzvimbo dzisingasvikike munzvimbo dzakachengeteka, senge migwagwa yakabatikana, mapaipi akamiswa, kukwira kwepamusoro-soro, mapaipi ekuendesa kure-kure, nemakamuri asina vanhu. Iko kushandiswa hakuite chete zvinobudirira kunatsiridza kugona uye mhando yekufamba kwekutarisa, asi zvakare kunogonesa i ...
JJB30-2new mhando Ruoko-rwakabata laser kure methane gasi leak detector
1.Overview Iyo Ruoko-rwakabata laser kure methane gasi leak detector inoshandisa tunable laser spectroscopy (TDLAS) tekinoroji kuti ikurumidze uye kunyatsoona kubuda kwegesi mukati mechinhambwe chemamita makumi matatu. Vashandi vanogona kuona zvakaomarara-kusvika kana kunyange nzvimbo dzisingasvikike munzvimbo dzakachengeteka, senge migwagwa yakabatikana, mapaipi akamiswa, kukwira kwepamusoro-soro, mapaipi ekuendesa kure-kure, nemakamuri asina vanhu. Iko kushandiswa hakuite chete zvinobudirira kunatsiridza kugona uye mhando yekufamba kwekutarisa, asi zvakare inogonesa mu ...
1.Overview Ruoko-rwakachengeterwa laser kure methane gasi leak detector ndeye yepamusoro-tekinoroji yepamberi tekinoroji inoona methane ichidonha kubva kure kure.Ichizvarwa chitsva chezvinhu zvakawanikwa zvekudonha, izvo zvinovandudza zvakanyanya kugona pamwe nekuchengetedzeka kwekufamba kwekutarisa, chimbo inowanikwa, inozivikanwa pasi rose. Inoshandisa tunable laser spectroscopy (TDLS) kukurumidza kuona kubuda kwegesi kusvika pamamita makumi matatu kubva ipapo.Vanhu vanogona kunyatsoona nzvimbo dzakaoma kusvika kana dzisingasvikike munzvimbo dzakachengeteka, ...